အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၂၅ - ဝီကီပီးဒီးယား
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၂၅
← ၁၉၂၂ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅ ၁၉၂၈ →
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုကောင်စီအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၂၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒိုင်အာခီစနစ်သစ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဥပဒေပြုကောင်စီသည် ဘုရင်ခံ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်သည်။ အမျိုးသားပါတီသည် မဲအရေအတွက် အများဆုံးရရှိသော်လည်း ဗြိတိသျှတို့သည် ရွှေတောင်ကြားပါတီကို မျက်နှာသာပေးခဲ့သဖြင့် ထိုပါတီမှဂျေအေ မောင်ကြီးဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဦးတုတ်ကြီးဦးဆောင်သည့် ဆွာရပ်ဂ်ျပါတီတွင် ယှဉ်ပြိုင်သူပေါင်း ၂၀၊ ရွှေတောင်ကြားပါတီတွင် ယှဉ်ပြိုင်သူ ၈၅ ဦး နှင့် အမျိုးသားပါတီတွင် ယှဉ်ပြိုင်သူ ၄၉ ဦးရှိခဲ့သည်။
ဆွာရပ်ဂ်ျပါတီသည် ကောင်းမွန်စွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ဦးတုတ်ကြီးသည်လည်း မိမိယှဉ်ပြိုင်ရာ စီရင်စု၌ပင် နေရာရှုံးခဲ့ရသည်။ မဲပေးသူဦးရေမှာ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာ ၁၉၂၂ ရွေးကောက်ပွဲ၏ ၆.၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍များလာခဲ့သည်။ ပါတီအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် မဲပေးသူဦးရေတိုးတက်လာသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
ဘုရင်ခံမှအမတ် – ၂၁
ဝန်ကြီးများ – ၂
↑ "Burmese Elections. A Forecast", The Times, 18 November 1925, p13, Issue 44122
↑ Robert H. Taylor (2009)။ The State in Myanmar။ NUS Press။ p. 185။ ISBN 978-9971-69-466-1။ 24 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Here Today, Gone Tomorrow The Irrawaddy,3November 2009
↑ "Elections In Burma. Grouping Of Parties", The Times, 13 November 1925, p11, Issue 44118
↑ "News in Brief", The Times, 25 November 1925, p15, Issue 44128
↑ The Ghost of Elections Past[လင့်ခ်သေ] The Irrawaday, 31 May 2010
↑ Haruhiro Fukui (1985) Political parties of Asia and the Pacific, Greenwood Press, pp106–154
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အထွေထွေ_ရွေးကောက်ပွဲ၊_၁၉၂၅&oldid=667523" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။